RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay heshiiskeedii ugu horreeyay ee suuqan xagaagan… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay heshiiskeedii ugu horreeyay ee suuqan xagaagan… + SAWIRRO
(London) 02 Luulyo 2019. Arsenal ayaa ku dhawaaqday maanta inay dhameystirtay heshiiska weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Martinelli.
18-sano jirka reer Brazil ayaa qandaraas muddo dheer ah u saxiixay kooxda reer London ee Arsenal isagoo uga yimid kooxda reer Brazil ee Ituano.
Qaab ciyaareedka cajiibka ah uu Gabriel Martinelli ku soo bandhigay kooxdiisii hore reer Brazil ee Ituano xilli ciyaareedkii tagay ayaa ka dhigtay in markii ugu horreysay loogu yeero xerada tababarka ee xulka qaranka Brazil.
Gabriel Martinelli ayaa lagu casuumay inuu kala qeyb galo xulka qaranka Brazil tartanka Copa America ee 2019.
18-sano jirkaan ayaa dhaliyay 10 gool 34 kulan oo uu u saftay kooxda ka dhisan Sao Paulo ka hor inta uusan qandaraas muddo dheer ah u saxiixin Gunners.
Gabriel wuxuu qeyb ka noqon doonaa qorshaha xilli ciyaareedka cusub ee Arsenal, waxaana laga yaabaa inuu ciyaaro inta lagu gudi jiro kulamada diyaargarowga ee ay Arsenal ku ciyaari doonto United States.
Arsenal ayaan weli xaqiijin in Gabriel ay ku bixin doonto qaab amaah ah ka hor xilli ciyaareedka cusub, waxaana warbaahintu ay warinaysaa inay kooxda reer London Weeraryahankan da’da yar ku soo qaadatay adduun dhan 6 milyan oo gini.
“Waa riyo aan lahaa tan iyo markii aan ahaa carruur iyo riyada qoyskeyga inaan ka ciyaaro Yurub iyo inaan u ciyaaro koox weyn oo sida Arsenal oo kale ah.”
“Waxaan doonayaa inaan fursadan qaato, ‘Waxaan ahay ciyaaryahan bixiya heerkiisa ugu fiican, waxaan u ciyaaraa koox ahaan, mar walbana waxaan doonayaa inaan ku guuleysto kulamada, islamarkaana aan hanto koobab.”
“Ciyaarahayga waxaan kala qeyb dhigaa Cristiano Ronaldo, waa ciyaaryahan si adag u shaqeeya, isagu waxa uu nafsad ahaantiisa ku riixayaa heerkiisa xiga.”
Gabriel ayaa sidoo kale u sheegay website-ka kooxda Arsenal: “Had iyo jeer waxa uu doonayaa u tartamista koobabka iyo abaal-marinnada shakhsi ah.”